Syria: Fanontaniana Momba Ny Tena Izy Amin’Ilay Bilaogera Hoe Voasambotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jolay 2011 6:24 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, polski, Español, srpski, عربي, বাংলা, Ελληνικά, Português, English
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny fandrakofana manokana ataonay momba ny Hetsi-panoherana Syria 2011.
Hatramin'ny nisian'ny tatitra fa hoe nisy vehivavy Siriana antsoina hoe Amina Arraf, noheverina ho i “Gay Girl in Damascus” – na “ilay vehivavy manambady vehivavy ao Damaskaosy” nosamborin'ny manampahefana tamin'ny Alatsinainy 6 Jona 2011, be ny ahiahy lalina nipongatra fa hoe mety tsy ho araka izay iheverana azy io vehivavy bilaogera io.
Tamin'ny Alarobia, niteny tao amin'ny fahitalavitra BBC ny vehivavy Kroaty iray antsoina hoe Jelena Lecic, nilaza fa ireo sarin'i “Amina” nivoaka tamin'ireo fampahalalam-baovao lehibe (isan'ireny ny Global Voices) dia sariny marina daholo ary nangalarina tao amin'ny kaonty Facebook-ny manokana. Ankehitriny, noho ireo mpanadihady sy bilaogera maro mandalina ireo hafatra maro naelfan'i “Amina” teo anivon'ny aterineto dia manjaka ny safotofoto.
Jelena Lecic miteny ao amin'ny BBC (dikasarin'ny fàfana tamin'ilay resadresaka)
Tantara iray mahabe resaka ny mikasika ilay sipan'i Amina, Sandra Bagaria, izay voalohany nokatsahan'ireo mpikaro-baovao mba hifampitafàna. Tsy ela dia nivoaka fa hoe, tahaka ireo maro hafa, i Sandra dia tsy nifandray tamin'i Amina afa-tsy tamin'ny alàlan'ny aterineto ihany. Rehefa nitombo ny ahiahy fa hoe i Sandra no mety ho mpanoratra namorona ny tantara, dia niteny tao amin'ny National Public Radio any Etazonia izy, mba handravàna ny honohono.
Elizabeth Tsurkov (@Elizrael), mpianatra monina ao Jerosalema, izay nifandray tamin'i Amina talohan'ilay lazaina ho fisamborana, ary niresaka tamin'i Sandra koa nanomboka teo, ary nibitsika hoe :
@Elizrael: Na teo aza izay navoakan'ireo mpampahalàla vaovao sasany, ilay sipan'i #Amina teo anivon'ny aterineto dia tsy nahalàla velively ity fitaka be vava ity. Na izy koa aza dia tena niady saina toy ny rehetra.
Mipetraka ihany koa ny fanontaniana ny amin'ny antony nanosika ny sasany hamorona tsaho mikasika fisamborana Siriana bilaogera, na dia efa fantatra aza fa tsy zava-mahagaga ny fisamborana noho ny fihogahogàna ao amin'io firenena io (ho fanampim-baovao, jereo ny Feo Voarahona, na Threatened Voices’ Pejy ho an'i Syria). Ny fahafantarana fa efa hatramin'ny taona 2007 no efa nisy teny anivon'ireo sehatra samihafa tanaty aterineto ny mombamomba an'i Amina, hatramin'ilay vohikala fitadiavam-bady MySpace, dia tena vao mainka nampisavoritaka ny bilaogera.
Ilay galifantsy amin'ny resaka fampahalalam-baovaon'olon-tsotra ao amin'ny NPR, Andy Carvin, dia nibitsika hoe:
@acarvin: Dia tena tsy hitako mihitsy hoe misy olona mamorona olona natory tanaty aterineto an-taonany maro taloha tany, niandry fotsiny ny hisian'ny korontana mba hanombohana mibilaogy momba izany. Misy zava-marina ao ambadimbadika ao.
Liz Henry, bilaogera Amerikana, nanao fikarohana lalina momba ny “sockpuppetry” (saribakoly voro-damba na bàn-kiraro hetsehin-tànana) ary nampiantrano fifanakalozan-dresaka niarahana tamin'ireo bilaogera noforomporonina fahiny, dia manoratra ao amin'ny bilaoginy hoe:
Amin'ity raharaha ity, ahoana re no fomba hahafahako miresaka avy aty lavitra aty e? Antenaiko fa takatrareo ny antony nahavery ny fahatsapàna voajanahary tato amiko raha ny momba an'i Amina. Tsy hoe tsy mino azy aho satria izy mpanoratra mahafehy tsara ny fampientanentanana sy ny fahaiza-mandresy lahatra, na hoe noho ny fironana ara-nofo ananany na koa ny hafanam-pony. Ohatra, na iray segondra aza aho tsy miahiahy mihitsy momba ny fisian'ny Riverbend, vehivavy izay nibilaogy tamim-pamirapiratana tokoa avy ao Baghdad, avy eo nandositra nankany Syria niaraka tamin'ny fianakaviany. Saingy manomboka mila marina aho, tena marina mihitsy, loharano tena azo antoka sy lalim-paka momba ilay Amina. Amin'ny fomba ahoana no hahafahan'ny mafàna fo iray izay ny ainy aza tandindonin-doza hanome izay fitokisana izay? Fanontaniana sarotra be izany.
Mandritra izany, midadasika be ny ahiahy mamakivaky ny tontolon'ny fitorahana bilaogy sy bitsika, fa hoe ity resabe miitatra manodidina ny hoe iza i Amina ity dia mety hanosika ny olona tsy hahalàla ny tena zava-misy marina, Siriana an'aliny tazonina am-ponja nanomboka tamin'ny Febroary noho ny fanehoan-kevitra tao amin'ny firenena.
Marietje Schaake, mpikambana iray ao amin'ny Parlemanta Eraopeana, dia nibitsika hoe:
@MarietjeD66: Ary aoka tsy ho adinontsika ireo olona an'aliny voafonja, novonoina ary niharan'ny famoretana nefa tsy mba nisy nahafantatra akory #amina